Mbara mmiri: gini bụ ya, njirimara ya, ihe kpatara ya na nsonaazụ ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Na okike enwere usoro nke na-aga n'ihu na akwa nke a maara dị ka mbuze. A na-ebugharị mbuze a na mpaghara dị iche iche na usoro okike. Taa, anyị ga-ekwu maka mbuze mmiri. Ọ gụnyere mbuze nke oke osimiri ahụ na iwepụ ihe na-edozi ala site na ájá ájá nke ebili mmiri, ebili mmiri, na ebili mmiri.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, ihe kpatara na nsogbu mbuze mmiri.
2 Kedu etu mbuze mmiri si apụta
2.1 Ebili mmiri
2.2 Oke Osimiri
3 Tydị nke mbuze mmiri
4 Ihe butere na nsogbu mbuze mmiri
Mmiri mbuze abughi ihe ozo kariri ihe ndi ozo na-aga n'ihu site na oke osimiri, ebili mmiri na ebili mmiri nke na-aga n'ihu mmiri. Ebili mmiri bụ otu n’ime ihe ndị na-ahụ ụzọ nke pụrụ ịhụ ngwa ngwa. Agbanyeghị, ebili mmiri na anụ mmiri na-arụkwa ọrụ dị mkpa na usoro mbuze a. Edị mbuze a nwekwara ike ime na okwute na aja n’onwe ya.
Mgbe ọ dị n'ụsọ mmiri nwere obere okwute, mbuze na-apụtawanye ngwa ngwa ma na-adị ngwa ngwa. Anyi aghaghi ighota na okwute bu ihe siri ike karie, ya mere, odi nkpa karie ike igha oge. Ọ bụrụ na ihe enweghị nkume ndị a, mbuze na-eme n'ụzọ dị ngwa karị. Mgbe enwere otu ebe dị nro karịa nke ọzọ na obere mpaghara, anyị na-ahụ usoro dị ka isi iyi, tunnels ma ọ bụ pula.
Kedu etu mbuze mmiri si apụta
Anyị ga-ahụ ihe ndị bụ isi na ihe kpatara ndapụta mmiri ji apụta. Isi ihe mere n'ụsọ mmiri ji ekpuchi n'ụsọ mmiri na-apụta n'ihi ebumpụta ụwa: ebili mmiri na oke osimiri. N'aka nke ọzọ, ọ na-abụkarị ihe omume nke ụfọdụ ndị dị ndụ mepụtara, ọ bụ ezie na usoro a adịchaghị oke na mbibi ikpeazụ nke usoro okike. Anyị ga-enyocha nzọụkwụ site na nzọụkwụ kedu akụkụ nke mbuze mmiri.
Ebili mmiri ahụ bụ ihe ndị ga-erute ụsọ oké osimiri ma nwee ike ibibi usoro okike. Ha nwere nkebi abụọ nke ije. Nke mbụ na-eme mgbe ebili mmiri ahụ na-arụ ọrụ. Nke a pụtara na ọ dị elu ma kụọ n'akụkụ ụsọ mmiri. Agba nke abụọ bụ mgbe ọ ghọrọ mmanya ogbugbu, nke bụ mgbe ọ mere dị ka a ga - asị na ọ bụ uwe mwụda ma dọrọ mmiri ahụ niile banye n'oké osimiri. Usoro a na - ewepụta mkpakọ na nrụpụta nrụgide na - aga n’ihu, nke n’aka nke ya na - ewepụta ntụpọ mmịpụta nke nwere ike ịmepụta mkpọda ugwu.
Anyi aghaghi iburu n’uche na mbuze mmiri na-aputa na nhazi onodu oge. Nke a pụtara na ka oke osimiri wee ghara ịdị nro site na omume ebili mmiri, ọtụtụ puku afọ gafere.
Ọ bụ akụkụ ọzọ iji tụlee mbuze mmiri. Isi ọrụ ya bụ ịdọrọ. Isi nke ebili mmiri ahụ na-emepụta mmiri dị n'okpuru, nke na-agagharị n'akụkụ nke ugbu a. Osimiri a nwere ike mepụta mmegharị yiri ya mgbe ebili mmiri ahụ na-asọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Ihe dị iche n’etiti ndị dị elu na ndị dị ala nke ebili mmiri na-ebutekwa mmiri na-adịghị agbanwe agbanwe. Ebili mmiri ndị a dabere na mpaghara ebe anyị nọ na afọ. Ha na-adị ike mgbe enwere nnukwu ọdịiche dị n’etiti obere na nnukwu ebili. Nke a bụ ebe anyị na-ahụ ụzọ ọpụpụ na oge abụọ.
Tydị nke mbuze mmiri
Dịka anyị kwuburu, mbuze mmiri na-adabere na ebe ọ dị. Ya mere, e nwere ụdị dị iche iche:
Ndị na-ebido hydraulic: A na-emepụta ha mgbe ebili mmiri kụrụ ihe ndị na-adịghị edozi ma kpochapụ ha. Ndị osimiri na-asachasị ihe ndị ahụ, ha na-erikarị nri n'ọnụ. Na mgbakwunye, n'ụzọ dị iche, ha na-eme ihe na nkume gbawara agbawa ma ndị a na-ebibi ka ebili mmiri ahụ na-abanye n'ike n'ike ma na-eme ka ikuku dị ugbu a. Nke a bụ otu, ka oge na-aga, ebibi nkume ndị ahụ.
Abrasion: Typedị mbuze mmiri a na-eme dị ka ngwaahịa nke esemokwu n'ụsọ oké osimiri nke mpekere nkume nke ebili mmiri na ebili mmiri na-ebugharị. Dabere n’etu na etu ha siri chụpụ ha, ha nwere ike ibute mbuze ma ọ bụ pere mpe. Typedị mbuze a dị mkpa na nhazi nke okenye crusts, cliffs na abrasion nyiwe.
Corrosion: corrosion na-eme n'ihi ọdịnaya nke mineral salts dị na oké osimiri. Salts ndị a nwere ike igbari ọtụtụ ihe. Karịsịa, ha na-atụgharị nkume nzu nzu dị n'ime. Mgbe ahụ, ha na-agbanwe ghọọ akuku coral ma ọ bụ nyere aka na usoro abrasion site na obere ahụ ha. Nrụrụ aka na-emekwa ime n'akụkụ oké osimiri. Nke a na-akpata site na haze. Ma ọ bụ na alụlụ ahụ bụ otu nnu ahụ nke na-eme mkpọtụ na ihe ndị a na-eme n'ụzọ nke njem nke ụsọ mmiri site na iru mmiri.
Usoro ndu: ọ bụ ụdị ọzọ mbuze nke mmiri, ọ bụ ezie na ọ dịchaghị mkpa. Immụ anụmanụ na-akpata mbuze. Oke osimiri nwere anumanu na-eri okwute a maara dika lithophagi. Ndị ọzọ bụ anụmanụ na-ebuga okwute limestone ahụ na-agbaze n’ime oké osimiri iji ghọọ okwute coral. Osisi na ahịhịa na-enwekwa mmetụta n’ịnọgide n’ebe mgbawara ugwu ndị ahụ na ime ka ọdịda ha daa.
Ihe butere na nsogbu mbuze mmiri
N'ime ihe ndị na-akpata mbuze mmiri anyị na-ahụ ihe ndị a:
Adọrọ mmasị nke ọnwa: mma nke ọnwa bụ ihe site na tides. Dika uzo nke ọnwa na isi nke nsụgharị nke uwa, omume nke uzo di iche.
Oké ifufe: oké ifufe na ihe ọzọ dị mkpa ịtụle. E nwere ebili mmiri nke nwere ike nke 9765 Kg / m1, nke nwere ike ịbawanye okpukpu atọ ike ya n'oge oke mmiri ozuzo.
Ka anyị lee ihe mmetụta dị na ya:
Ugwu: Mbibi mmiri na-egosipụta na enyemaka nke ụsọ mmiri. Ugwu ndị ahụ bụ ugwu dị larịị nke a na-akpụ site na ikuku ebili mmiri. Ha bụ nsonaazụ nke eyi akwa nkume.
Abrasion nyiwe: ha na-emebi emebi nyiwe okwute na-apụta mgbe ebili mmiri na-erughị ala. Ọ bụ ndọtị dum nke ụsọ mmiri.
Omume mmiri: Ha na-etolite mgbe mbuze sitere n'oké osimiri na-emesi otu ebe ugwu ike.
Ọgba mmiri: E kere ha iji merie ihe ndị ahụ na ike dị ala.
Ala mmiri: ha bu iberibe ala nke ala mmiri jikọtara.
Akụ ụdọ: ha na-etolite site na nchịkọta nke sedimenti.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mbuze mmiri, ihe kpatara ya na nsonaazụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Mbara mmiri